Uvavanyo lwe-IPhone 6s kunye | Iindaba zeGajethi
ULuis Padilla | | Iiselfowuni, Reviews
Ii-iPhones ezintsha ze-6 kunye nee-6s Plus zisandula ukufika eSpain naseMexico kwaye asifuni kuphoswa lithuba lokuhlalutya ii-smartphones ze-Apple ezintsha. Ngokukodwa inkulu kakhulu, i-iPhone 6s Plus, ethi yona inesikrini sayo esingu-5,5-intshi ize kuqhubeka nokujongana nemarike ethe kratya yeephedi.
Ikhamera yayo entsha ye-12 Mpx ngasemva, 5 Mpx ngaphambili, isikrini esigcweleyo nge-3D Touch kunye neRetina Flash entsha Olunye lolona tshintsho lubalulekileyo kwesi sizukulwana sitsha see-iPhones. Sikunika zonke iinkcukacha ezingezantsi kunye nevidiyo apho unokubona khona imisebenzi emitsha isebenza.
1 Uyilo oluqhubekayo
2 Amandla angakumbi, ukuzimela okufanayo
3 Ukuphuculwa kwekhamera
4 Iifoto eziBukhoma, dlalisa imifanekiso yakho
5 Ukuchukumisa kwe3D, uguquko kumboniso we-iOS 9
6 Iifowuni ezintsha ngaphakathi, ezifanayo nangaphandle
Ukunyaniseka kwisithethe, I-Apple yenza utshintsho kwisizukulwana sayo «s» ngaphakathi. Uhlengahlengiso kuyilo lwee-iPhone 6s zincinci kwaye azibonakali. I-aluminium eqinisiweyo iyinika ubunzima ngaphezu kwesizukulwana esidlulileyo, ngakumbi iigram ezingama-20 ngaphezulu (192 g) kunye nobukhulu bayo bonyusa i-0,1mm kodwa iyahambelana nendawo yokugcina iimodeli zangaphambili. Ukongeza ekufumanekeni kumbala omtsha okhethekileyo we "rose rose" wee-6s kunye nee-6s Plus, ungahlulahlula kwisizukulwana esidlulileyo ngu- "S" oqoshwe ngasemva kwetheminali.
Amandla angakumbi, ukuzimela okufanayo
Iiprosesa ezintsha ze-A9 kwii-iPhone 6s kunye nee-6s Plus zizinto ezimbini ezizezona "zilwanyana" zigqwesa ezinye iincwadana zamanje. Ukuba koku sidibanisa Imemori ye-RAM inyukela kwi-2GB Isiphumo kukuba ukusebenza kwezi zigaba zimbini kubalasele kuwo nawuphi na umsebenzi abajongana nawo.
Iibhetri, nangona kunjalo, ziphelile ngokwamandla, kodwa hayi ngokuzimela.. Ukuphuculwa kokusebenza kakuhle kweeprosesa kuqinisekisa ukuba ubomi bebhetri ye-iPhone 6s kunye ne-6s Plus iyafana naleyo yabo bangaphambi kwabo, into iApple eyiqinisekisa kwiwebhusayithi yayo kwaye umbono wethu wokuqala uqinisekisa. Ukuza kwi-6 Plus khange ndibone naluphi na utshintsho ngaphandle kobomi bebhetri, ngaphezulu, enkosi kwinguqulelo entsha ye-iOS 9.1 ndingade nditsho ukuba iphezulu.
Iikhamera ezimbini kwii-iPhones ezintsha ziphuculwe. Ikhamera yangemuva inyuka iye kwi-12 Mpx kwaye kwimeko ye-iPhone 6s Plus ikwagcina i-optical stabilizer, into eyahlulahlula kwii-6s ezingekabinayo. Ngeenjongo ezibonakalayo utshintsho alubonakali, kwaye iifoto ezithathwe nge-iPhone 6 Plus kunye ne-6s Plus kwiimeko ezifanayo ziyafana. Ikhamera yangaphambili itshintshe kakhulu kwaye iyabonisa. Nge-5 Mpx yangoku, iifowuni zevidiyo kunye neeselfie zahluke ngokupheleleyo, Ngomgangatho ophezulu kakhulu kuneemodeli zangaphambili. I-Apple ikwazise iRetina Flash, eyenza ukuba isikrini sikhanyisele ukuthatha i-selfie kwaye senze njengeFlash, into efezekisa iziphumo ezilungileyo kukukhanya okuphantsi.
Ukurekhodwa kwevidiyo kuyaphuculwa ngokwazi ukurekhoda ividiyo ye4K, kwaye ngexesha lokurekhodwa kwayo ungathatha iifoto eziyi-8 Mpx. Kwakhona kubandakanywa ukurekhoda kwevidiyo ye-FullHD kwi-fps ezili-120. Zonke ezinye iimpawu ngokubhekisele kwirekhodi yevidiyo kunye nokudlalwa ngokufanayo ziyafana neemodeli zangaphambili.
Iifoto eziBukhoma, dlalisa imifanekiso yakho
Enye yezona zinto zintsha zithandwayo yinto enokwenzeka yokuba uthathe iifoto zoopopayi. Ngalo lonke ixesha uthatha ifoto, ngaphandle kokwenza nantoni na ekhethekileyo, uya kuthi ngokurekhodisha ulandelelwano lwevidiyo oluncinci onokuthi udlale ngalo enkosi kwi-3D Touch. Ifoto iya kuba mileyo, njengayo nayiphi na ifoto, kodwa xa ucinezela kancinci kwiscreen iya kuqala ukudlala kwaye idlale ividiyo encinci kunye nokulandelelana komsindo. Ezi foto zinokwabelwana ngazo naziphi na izixhobo ezine-iOS 9 ezifakiweyo, ezinokudlala nazo.
Ukuchukumisa kwe3D, uguquko kumboniso we-iOS 9
Yeyona nto intsha inomdla kwezi iPhones zintsha. Isikrini sakho sahlukile kwiimodeli zangaphambili kwaye iyakwazi ukubona inqanaba loxinzelelo olwenzileyo kuyo. Uhlobo olutsha lwe-Force Touch oluthiwa ngu-Apple kwi-3D Touch kwi-iPhone ekuvumela ukuba unxibelelane nesixhobo sakho ngendlela entsha. Cofa kwi icon kwaye usetyenziso luya kuvulwa, cofa kancinci kwaye uya kuba nakho ukufikelela kweyona misebenzi ixhaphakileyo. Ungathumela ifoto ku-Twitter, tsalela umnxeba okanye ubhale umyalezo ngqo kwi-springboard yakho.
I-3D Touch ikwabonelela ngamathuba amaninzi ngaphakathi kwezicelo, indlela yokujonga i-imeyile kwibhokisi engenayo, yiphawule njengeyifundwayo okanye uyicime, kwaye konke oku ngaphandle kokungena. Kwenzeka into efanayo ngamakhonkco kumxholo wewebhu: ungazijonga kuqala ngokucinezela ikhonkco kancinci.
Abaphuhlisi babheja kakhulu kule teknoloji intsha Kwaye sele zininzi izicelo zomntu wesithathu esinokuzifumana kwiVenkile ye App ezihambelana ne3D Touch, kwaye oku akukenzanga enye into ukuqala. Le 3D Touch inye yile ikuvumela ukuba ubone oopopayi bomfanekiso owulungiselele njengephepha lodonga kwiscreen sokutshixa, okanye ukufikelela kwimultitasking okanye isicelo sangaphambili ngokukhawuleza ngaphandle kokucinezela iqhosha lokuqalisa.
Iifowuni ezintsha ngaphakathi, ezifanayo nangaphandle
Imisebenzi emitsha ebandakanyayo kwezi iPhones 6s kunye nee-6s Plus inokuba yinto enomdla kakhulu kuninzi, nangona inyani yokuba ayifani ngokubonakalayo kuthetha ukuba abanye abaninzi abaluboni utshintsho olunomtsalane ukuba sele benayo i-6 okanye i-6 Plus. Ukufika kwe-3D Touch lutshintsho olukhulu kwi-iOS, nangona sisiqalo solu tshintsho. Ngaba kufanelekile ukutshintsha? Abo bavela kwi-iPhone 5s okanye ngaphambili baya kuqaphela umahluko omninzi malunga nokusebenza, ibhetri, ikhamera kunye ne-interface, kodwa mhlawumbi abo sele benayo i-6 okanye i-6 Plus yakuba nje imincili yotshintsho kwisixhobo esitsha idlulile bayakuqonda yeyantoni bambalwa izinto ezintsha abanokuzenza ngezi zixhobo zintsha bebengenakwenza ngazo ezindala.
Inkqubo entsha enamandla ngakumbi ye-A9 kunye ne-2GB ye-RAM
I-aluminium entsha eqinisiweyo
Ukuphuculwa kwekhamera ye-12MP kunye ne-5MP kunye nokurekhodwa kwevidiyo ye-4K
Amanqaku amatsha: Ukuchukumisa kwe3D kunye neefoto eziBukhoma
Ukukhawuleza kunye nokuthenjwa okungaphezulu kwe-ID
Uyilo olufanayo nemodeli yangaphambili
Ayidlali i4K ngaphandle kokuyirekhoda
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Ukuphononongwa kwe-iPhone 6s Plus entsha
Uphononongo oluhle kakhulu kodwa ukuba bendifuna ukuphawula ngento eyenzekileyo kum, benditshintshe iphone 1 kuba bendicaphukile yile ibisenzeka kum kwaye iyaqhubeka ukwenzeka nangona ndibona ukuba uLuis naye uyenzeka kuwe. Kuyavela ukuba xa utshixe i-iPhone okwexeshana okanye uthi imizuzwana eli-10 okanye ngaphezulu xa uyivula ngeminwe yakho, ibha engentla apho ixesha likhoyo, ibhetri kunye nomqhubi ziyanyamalala kwaye kuthatha ixesha ukuphinda zivele. Ndicinge ukuba inokuba yi-Chip kuba yeyam isuka eSamsung okanye i-iPhone yam ayilunganga kodwa ndizibonile iividiyo phaya ezenzekayo kubasebenzisi be-youtubers abaphononongayo andazi ukuba uyazi ukuba kutheni inokuba yile okanye Chukumisa ukusilela kwe-ID kuba ihamba ngokukhawuleza kwaye ngo-6 xa ihamba kancinci ayenzeki njengoko ndiqinisekisile kutata. Ndiyifumene.
I-6s Plus yam yi-TSMC, kwaye ewe, kuyinyani into oyithethayo iyenzeka, kodwa igcwele, ke ngokuqinisekileyo iya kuba sisoftware bug eya kulungiswa kuhlaziyo oluzayo.
Ndiyabulela kakhulu Luis ngokundiphendula ususe uloyiko endinalo phezu kwalo hehe. Inyani yile yokuba ayonwabisi kodwa iyacaphukisa kuba ngamanye amaxesha kuthatha ixesha elide ukukuvumela ukuba ushukumise isikrini kodwa ngethemba nge-iOS 9.1 bugs ezinje ziya kulungiswa. Into endiyiqaphelayo kukuba ibhetri ihamba ngathi ipetroli emotweni hehe. Kodwa ndicinga ukuba andizukuba nethamsanqa kwaye ukuba ndiyitshintsha kwakhona ndinike i-TSMC. Ngaba ucinga kufanelekile ukutshintsha kunye nokutshintsha ii-iPhones de ndichukumise i-TSMC? Kuba ndicinga ukuba i-2% okanye i-3% ayibonakali kangako kwaye ndingathanda ukwazi ukuba wena, une-TSMC, uyakuqaphela ukuba ihamba ngokukhawuleza kune-Iphone 6. Enkosi kwakhona kwaye ndilindele impendulo yakho. Umbuliso.
Andiqondi ukuba kukho iyantlukwano. Umahluko uza kuza no-6.1. Iibhetas zilunge kakhulu kwaye ukusebenza kunye nebhetri kuyabonakala kakhulu, uya kubona ukuba ulubona njani utshintsho.
Khange utsho ukuba ikhamera ye-6s ayingcono kunekhamera ye-6?
Ikhamera ye-iPhone 6s ingcono kunaleyo ye-6. Enye into kukuba i-12 Mpx ayilulo utshintsho olwaneleyo ekuphuculeni ukuba lubonakale, kodwa ezinye iimpawu zilingana kuyacaca ukuba i-12Mx ibhetele kune-8Mpx.
Kulungile, kukusilela okukhulu ngokwaneleyo ukuba kungabhalwa nge-4k kwaye kungabinakho ukuyivelisa kwakhona. Okungakumbi xa ngalo mzuzu zininzi iindlela zokujonga umxholo wayo. Ngaphantsi kunamaxabiso asingathwa yiApple, ngendibeke isikrini ngomgangatho we4k. Sele kukho ii-mobiles eziphelelwe lixesha ezinjenge-LG G3 enayo ukusukela kwinguqulelo yayo yokuqala. Kukwenzeka okufanayo nakwibhetri, kubonakala ngathi bayoyika ukubeka ibhetri ngomthamo owoneleyo ... manene, kukho iiterminal kwimarike yamanqanaba asezantsi ane-4000 mAh. Ubisi, wenza ntoni ngalezo zinto zibambekayo baziphetheyo? 2750mAh ye-iPhone 6s kunye, iphantse yahlekisa; Ngokuqinisekileyo, akumangalisi ukuba abantu bakhalaze. Njengoko uqoqosho lusebenza kakuhle njengokusetyenziswa kwezixhobo, akunakwenzeka ngokwasemzimbeni ukuba ngokulinganiselwa okunjalo ukusebenza kwebhetri kunokuba kuhle. Kuya kufuneka ufunde okungcono kuzo zonke ezi mpawu ngaphambi kokuqalisa imveliso entsha, nceda, kuba sele benemodeli ezimbalwa kwintengiso. Kwaye eyona nto imbi kukuba endaweni yokunyusa amandla abo banciphisile. Kwaye akukho nto ilungileyo kum ukuba ndiyifunde kwimithombo yeendaba ezininzi, "bayinciphisile kuba bekungekho ndawo", masibone, bendineebhetri ze-3000 mAh ezandleni zam ezihlala kwiindawo ezintathu zebhetri ye-iPhone 6 Plus. Kudala ndisebenzisa i-iPhone ukusukela nge-3G kodwa kukho izinto nge-Apple endingasoze ndiziqonde, ezinje ngokunyuka kwamaxabiso ngaphandle kwamanyathelo kwaye eyona nto imbi kukuba, njengoko kwenzekile kwilizwe lokuthengisa izindlu nomhlaba, sinoxanduva loku bubble yokuqikelela abayinyusileyo.
amadoda oyisileyo sitsho
hello ndinike umahluko omkhulu kathathu phakathi kwe-iPhone 3s vs i-iPhone 6s endinayo kufanelekile okanye ayizukuthenga ii-5s? Enkosi ngayo yonke into, ndingumqhubi wetraki kwaye kubalulekile ukuba ndizise i-iPhone yam kakuhle ngokwamkela kunye neefoto zegps kunye nezinye ii-ss
Phendula kumadoda aphumeleleyo